५ जेठ २०७६ | May 19, 2019
उडाउने होइन गुडाउने
८ श्रावण २०७५
गत साता पूरा भक्तपुर डुबानमा परेपछि देशभरि पानीजहाजको चर्चा चल्यो । सामाजिक सञ्जाल पूरा पानीजहाजमय बन्यो । सबैले भन्न थाले कि अबचाहिँ देशमा पानीजहाज चल्ने निश्चित भयो । डुबान त नेपालमा योभन्दा पहिले पनि भएकै हो । डुबान नभएको वर्षै कहिले पो छ र ? भक्तपुर नभए कीर्तिपुर, कीर्तिपुर नभए जनकपुर, जनकपुर नभए टनकपुर त डुबानमा परिरहेकै थियो । तर, पहिला–पहिला डुबानका बेला यस्तो पानीजहाजको… विस्तृत समाचार
३२ अषाढ २०७५
सत्तामा वामपन्थीको दुईतिहाइसहितको सरकार आएपछि देशमा एउटा नयाँ शब्द पनि आएको छ, अधिनायकवाद । यस्तो कुनै पनि वाद पहिले कतै सुनिएको थिएन । अहिले जता हेरे पनि छ्याप्छ्याप्ती छ । वास्तवमा सरकारको आलोचना गर्नेहरू अहिले अधिनायकवादको कुरा ल्याउने गरिरहेका छन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सीधै आरोप लगाउँछन् ( अधिनायकवादी ! यति भनेपछि अरू भन्नै परेन । तर, अहिले केही समय भयो, यो अधिनायकवादी भन्ने… विस्तृत समाचार
१० अषाढ २०७५
अन्ततः ‘बाजेको सेकुवा’ पनि बन्द हुने भएछ । किनभने सरकारले आइन्दा बाजेको सेकुवा नाम राखेर पसल राख्न नपाइने निर्देशन दिएको छ । त्यसैले यो नामबाट अब सेकुवा बेच्न नपाइने भएको हो । त्यसो त ‘बाजेको सेकुवा’ ले बाहिर मात्रै सेकुवा बेच्ने रहेछ । भित्र– भित्र त सुन बेच्दो रहेछ । त्यसैले अब सेकुवाको साटो सुनै बेचे पनि कुनै फरक नपर्नु पर्ने हो । सुन बेचेपछि… विस्तृत समाचार
हेलो ! मन्त्रीज्यू हो ? हजूर हो । तपाइँ को बोल्नुभयो ? म पत्रकार । पत्रकार ? कहाँको पत्रकार ? नेपालकै पत्रकार हुँ । ए...पत्रकार पो ! हजूर, मन्त्रीज्यू । ल ठीकै छ नि । भन्नोस् के छ ? हजुरको एउटा अन्तर्वार्ता लिऊँ भनेर... अन्तर्वार्ता ? अब हुन त हुन्छ... हुन्छ ? म आऊँ त ? अन्तर्वार्ता त हुन्छ । तर मेरो एउटा शर्त छ… विस्तृत समाचार
सरकार र व्यापारी
सरकारले भनेको कुरा नटेर्ने त हाम्रो रोगै छ । सरकारले कुनै निर्देशन दिन्छ तर त्यो कसैले पालना गर्दैन । सरकारले कुनै निर्णय गर्छ तर त्यो कहीं पनि कार्यान्वयन हुँदैन । आखिर गरेको मान्ने र भनेको टेर्ने त कोही पनि नहुँदा रहेछन् । देश बिग्रेको त्यही कारणले हो । तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारले भन्नेबित्तिकै मानिहाल्ने एउटा ठूलो समूह पनि यो देशमा छ । त्यो हो… विस्तृत समाचार
३ अषाढ २०७५
टाइममा काम नसकाउने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भन्नेबित्तिकै भौतिक योजना मन्त्रालयको पेट पोल्न थालेको छ । कारबाही गर्छु भन्ने गृह मन्त्रालय, पेट पोलेकोचाहिँ भौतिक मन्त्रालयको । ठेक्का लिएर काम नसकाएको कारणले देशमा असुरक्षासमेत बढ्यो भन्दै गृहले ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने पहल गरेको थियो । गृहको त्यो पहल सुरु हुनेबित्तिकै भौतिक योजनाले भनेछन् (गृहजी ! ठेकेदारलाई तपाईंले कारबाही गर्न पाउनुहुन्न । कारबाही गर्ने अधिकार मेरो हो । गृहले… विस्तृत समाचार
सुनको कप र सुन
भोलिबाट वल्र्ड कप पनि लाग्ने भयो । अब आउँदो एक महिनासम्म एउटै बलका लागि बाइस–बाइस जना खेलाडीको लुछाचुँडी मच्चिने भयो । संसारभरका मानिस अब रात रातभरि एउटै बल हेरेर जाग्राम बस्ने भए । वल्र्ड कपको क्रेज विश्वभरि नै छ । खास गरी मानिस वल्र्ड कप हुँदा त्यही कपमा पनि आँखा लगाएर बसिरहेका हुन्छन् । वल्र्ड कपको कप त सुनको हुँदो रहेछ । त्यसैले सबैको लोभ… विस्तृत समाचार
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण आएपछि त्यसबारे चर्चा चल्न थालेको छ । अझ सम्पत्तिभन्दा पनि चर्चा नै बढी आयो कि जस्तो लाग्छ । किनभने यसपटक सम्पत्तिको विवरण जो आयो, त्यो वास्तवमै चर्चालायक थियो । चर्चालायक भएकैले चर्चा पनि भएको होला । कारणचाहिँ के भने यसपटकको सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीभन्दा पनि उहाँहरूका श्रीमती बढी धनी देखिए । किनभने श्रीमतीलाई दाइजो नै यति दिइएको थियो कि, त्यसैको बलमा… विस्तृत समाचार
​को तस्कर, को माफिया ?
४ जेठ २०७५
गृहमन्त्री कमरेड रामबहादुर थापा बादलले हालै एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएछ कि देश अहिले तस्कर र माफियाको हातमा छ । उहाँको अभिव्यक्ति सुनेर सबै जना चकित भएका छन् । अरूको त के कुरा, स्वयं तस्कर र माफियै पनि चकित छन् । आखिर एक बहालवाला गृहमन्त्रीले भनेको कुरा– नपत्याउने कसरी ? विभिन्न गुप्तचरी स्रोतबाट उहाँले यो कुरा पत्ता लगाएको हुनुपर्छ । उहाँको त स्रोत पनि धेरै छ ।… विस्तृत समाचार
यसपालि जनकपुरमा अचम्मै भयो । नेपालका प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी एउटै भेषभुषामा प्रकट हुनुभयो । दुवै प्रधानमन्त्री एउटै मञ्चमा आसीन हुँदा धेरैले त छुट्याउनै सकेनन् आखिर केपी ओली कुन, नरेन्द्र मोदी कुन । दुवै उस्तै । दुवै जना उस्तै–उस्तै देखिनु सानो कुरा होइन । केपी ओली र नरेन्द्र मोदी दुवैजना उस्तै देखिनु कहाँ सानो कुरा हुन्छ ?… विस्तृत समाचार
Newer 12345 Older Last ›
​अर्को हप्ता भारतमा को प्रधानमन्त्री आउलान् ?
​सिध्याए चुनाव, शुरु भयो तनाव
​इशारा इशारामै अख्तियार
​भिभिआईपीको जहाज तयार
​यस्तो पाराले चल्दैन सरकार !
नयाँ नयाँ कुरा निस्कँदै
​झर्नैपर्ने को, पर्नैपर्ने को ?